China Cone isityumzi kwemveliso kunye Factory | Izixhobo zoLungiso lweChengxin
Cone isityumzi ilungele zokutyunyuzwa izinto ngobulukhuni eliphakathi. Inezinto eziluncedo zoyilo olufanelekileyo, ukusebenza okuzinzileyo, ubungakanani bokutya okukhulu, ubungakanani be-particle size, kunye nokulungiswa okulula. Ngokukodwa, igcina amandla kunye nenkqubo yokuqala yokuqhekeka komhlathi.
Cone isityumzi ilungele zokutyunyuzwa izinto ngobulukhuni eliphakathi. Inezinto eziluncedo zoyilo olufanelekileyo, ukusebenza okuzinzileyo, ubungakanani bokutya obukhulu, ubungakanani be-particle size, kunye nokulungiswa okulula. Ngokukodwa, igcina amandla kunye nenkqubo yokuqala yokuqhekeka komhlathi. Kuye uhlobo olutsha isityumzi ukugqibezela otyumza izinto ezinkulu nezincinci ngexesha elinye. Inkqubo yenziwe lula kwaye iindleko ziyagcinwa.
Le isityumzi Isigaxa isebenzisa iteknoloji imveliso phambili kunye nobuchwepheshe. Yimveliso entsha yomhlathi we-crusher ngokusebenza kakuhle, ukugcina amandla kunye nokukhuselwa kwendalo. Uphawu lwayo kukuba izinto ezigqityiweyo zinokuhlengahlengiswa ngokwemfuno, indawo erhabaxa, ephakathi, entle kunye neenkcukacha ezahlukeneyo zizalisekile; akukho flake, akukho mzimba ugudileyo, ii-engile ezininzi kunye nomda omninzi wokuqinisekisa ukomelela okuxineneyo. Eyona ilungele uhola wendlela, ulwakhiwo kunye nezixhobo ezinkulu zobunjineli. Isityumzi ishenxisa inkqubo ngokwaphula lokuqala isityumzi umhlathi, kwaye iba uhlobo olutsha isityumzi zokutyumza izinto ezinkulu nezincinci ngexesha elinye. Inezinto eziluncedo kwimveliso enkulu, ukusebenza okuphezulu, amandla amancinci kunye nokugcina iindleko ezityumkileyo zezixhobo. Ilitye eliqhekezwe ngulo matshini aligqibanga kuphela ngokubalula, kodwa lifana kwaye licacile. Kuyinto indawo endala umhlathi isityumzi kunye nefuthe isityumzi.
Ubuncinci besayizi yokuphuma
Egqithileyo ZG feeder eshukumayo
Okulandelayo: Ukulwa nesityumzi
Mqengqeleki omnye Isityumzi
Nkqo Impact isityumzi
PCH series isandi isando isityumzi